NOSY-BE : Vehivavy 241 isa no iharan’ny herisetra ara-batana, ara-tsaina, ara-nofo
Mbola anisany firenena miady mafy amin’ny famongorana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy i Madagasikara. 1er août 2017
Efa miha-mivaona ny fiarahamonina ankehitriny ary efa zary lasa mateti-piseho ny trangana fampijaliana mihatra amin’ireo vehivavy na io ara-batana na ara-
tsaina na ara-nofo indrindra indrindra.
Araka ny antontan’isa voaray dia maro an’isa amin’ireo vehivavy ianjadian’izay herisetra izay ny any amin’ny Distrikan’i Nosy-Be Hell-Ville. Ny taona 2016 lasa teo iny dia mahatratra hatrany amin’ny 241 ny isan’ireo vehivavy iharan’ny herisetra any an-toerana izany hoe efa ny 72%n’ireo vehivavy ary saika mbola tsy ampy taona ny ankamaroan’izy ireo.
Fantatra fa isan’ireo faritra mafampana amin’ny fisian’ireo andian-jatovo maditra
i Nosy-Be. Ankoatra ny fandravana fananan’olona ataon’ireto farany dia mahavita manolana vehivavy ihany koa ry zalahy, izay lasa itondran’ireo lasibatra takaitra ara-tsaina mandra-pahafaty mihitsy. Ahiana ho tena mampirongatra ny fampijaliana mianjady amin’ny vehivavy izay ihany koa ny fandraisan’ireo lehilahy zavamahadomelina toy ny zava-pisotro misy alikaola sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fomban-tany izay mbola mametraka ny elanelana eo amin’ny vehivavy sy ny lehilahy. Manoloana io antotan’isa tsy mitsaha-mitombo io dia efa misy amin’izao ny fandraisana andraikitra ataon’ny fanjakana.
Nosokafana ny ivon-toerana natao hikarakarana sy handraisana an-tanana ireo tovovavy iharan’izay herisetra ara-nofo ao Nosy-Be izay. Mitohy ihany koa ny ezaka ataon’ireo mpisehatra rehetra, izay ahitana teratany sy vahiny hoentina indrindra hamongorana ny karazana herisetra mianjady amin’ny vehivavy hatramin’ny fakany.